Technology Archives - Balsirjana
बादल आकाशमा रहनुको कारण के हो ?
बालसिर्जना संवाददाता ५ असोज २०७६, आइतवार
गुरुत्वाकर्षण बलका कारण सबै वस्तु जमिनतिर खस्ने गरे पनि बादल भने आकाशमा तैरिरहेको हुन्छ । किन त ? वास्तवमा सबै बादल आकाशमा रहिरहन्छ भन्नु गलत हुन्छ । किनकी केही प्रकारका बादल पृथ्वीको सतहमा नै पनि पाइन्छ । कुहिरो पृथ्वीको सतहमा पाइने बादलको एउटा उदाहरण हो । हावामा केही...बाँकी